ကျန်းမာရေး Archives - Richard Myo Thant
Third Eye For Third Door
? WHO က COVID-19 အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ ဆေး (၃) မျိုးကိုစမ်းသပ်နေပါတယ်။
September 4, 2021 September 5, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on ? WHO က COVID-19 အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ ဆေး (၃) မျိုးကိုစမ်းသပ်နေပါတယ်။
546 Pageviews Artesunate, imatinib နဲ့ infliximab တို့ကို နိုင်ငံပေါင်း (၅၂) နိုင်ငံက ဆေးရုံပေါင်း (၆၀၀) ကျော်မှာစမ်းသပ်တာမို့ Covid-19 အတွက် တကယ်အသုံးကျမကျ mass testing ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ The World Health Organization on Wednesday announced major international trials of three drugs to find out whether they improve the condition of hospitalised Covid-19 patients. WHO ဟာ #ဆေးရုံတက်နေရတဲ့ ကိုဗစ်လူနာတွေရဲ့အခြေအနေတိုးတက်မှုရှိလာနိုင်မလားကို အထက်ပါဆေးသုံးမျိုးကိုသုံးပြီး စမ်းသပ်မှာဖြစ်ကြောင်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
September 4, 2021 September 4, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on Progeria ပရိုဂျီးရီးယားရောဂါ
286 Pageviews တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာ အသက် (၂၀) အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တစ်ယောက်ဟာ သူ့ထက်အများကြီးမျက်နှာရင့်ရော်တဲ့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ပရိုဂျီးရီးယား (သို့မဟုတ်) ဟက်ချင်စန်-ဂေးဖို့ စင်ဒရုန်း (Hutchinson -Gilford syndrome ) ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးလာတဲ့ကလေးဟာ အသက်ရင့်ရော်တာမြန်ပြီး အသက် (၂၀) မပြည့်ခင်ဆုံးပါးသွားလေ့ရှိပါတယ်။ ပရိုဂျီးရီးယားဟာ အလွန့်အလွန်ရှားပါးတဲ့ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လူသန်း (၂၀) မှာမှ တစ်ယောက်ယောက်ဖြစ်တတ်တဲ့ရောဂါမျိုးပါ။ မနှစ်က Progeria Research Foundation ပရိုဂျီးရီးယားသုသေသနဖောင်ဒေးရှင်းက စစ်တမ်းကောက်ကြည့်ရာမှာ (၅၃) နိုင်ငံမှာ ကလေး (၁၇၉) ယောက်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ပရိုဂျီးရီးယားကလေးတွေဟာ ပျမ်းမျှအသက် (၁၃) နှစ်မကျော်ပဲ ၉၀ ရာနှုန်းဟာ heartattack နှလုံးရပ်ခြင်း၊ stroke လေဖြတ်ခြင်းတို့နဲ့ သေဆုံးတတ်ပါတယ်။ ပရိုဂျီးရီးယားဟာ ရှားပါးတဲ့ genetic […]
?? စင်ကာပူမှာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး တတိယအကြိမ် booster dose ကို အသက်ကြီးသူတွေနဲ့ immune system ချို့ယွင်းချက်ရှိသူတွေကို စထိုးပေးပါတော့မယ်။
September 4, 2021 September 6, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on ?? စင်ကာပူမှာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး တတိယအကြိမ် booster dose ကို အသက်ကြီးသူတွေနဲ့ immune system ချို့ယွင်းချက်ရှိသူတွေကို စထိုးပေးပါတော့မယ်။
306 Pageviews အသက် ၆၀ နဲ့အထက်အသက်ကြီးသူတွေ၊ ကိုယ်ခံအားစနစ် အတော်အတန် (သို့မဟုတ်) ကြီးကြီးမားမားချို့ယွင်းချက်ရှိသူတွေ၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာမှာနေထိုင်သူတွေကို ထိုးပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ပါလူတွေဟာ ကိုဗစ်ဖြစ်ရင်ပြင်းထန်နိုင်တာရယ်၊ ပထမနှစ်ကြိမ်ကနေ immune response ကိုယ်ခံအားတုန့်ပြန်မှုနည်းနိုင်တာရယ် ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။[bg_collapse view=”link” color=”#4a4949″ expand_text=”Read More” collapse_text=”Read Less” ]သူတို့ကို mRNA ကာကွယ်ဆေးကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးချိန် ၆ လကနေ ၉ လအကြာမှာ တတိယတစ်လုံးကို ထိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း အဲ့ဒီလူတွေဟာ ပထမအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတာ ၆ လပြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူအာဏာပိုင်တွေဟာ booster dose ထိုးသူတွေမှာ အန္တရာယ်ကင်းမှုနဲ့ အာနိသင်ရှိမှုကိုစောင့်ကြည့်ပြီးမှ အခုလိုထိုးပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်း … တို့ဆီမှာ ဟိုကောင်မမွှေခဲ့ရင် … တို့ဆီကလူကြီးတွေလည်း တတိယအကြိမ် booster dose […]
? စင်ကာပူကဆရာဝန်တစ်ယောက်ဟာ နောက်တစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာ antibiotic ဆေးတစ်မျိုးနဲ့ antifungal ဆေးတစ်မျိုးကို အသက် (၇) နှစ်နဲ့အောက်ကလေးတွေကိုမပေးဖို့ ယာယီတားမြစ်ခံရပါတယ်။
September 4, 2021 September 4, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on ? စင်ကာပူကဆရာဝန်တစ်ယောက်ဟာ နောက်တစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာ antibiotic ဆေးတစ်မျိုးနဲ့ antifungal ဆေးတစ်မျိုးကို အသက် (၇) နှစ်နဲ့အောက်ကလေးတွေကိုမပေးဖို့ ယာယီတားမြစ်ခံရပါတယ်။
208 Pageviews Dr Erwin Kay Aih Boon ဟာ Healthwerkz Medical Centre က GP ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အော်တစ်ဇင်ရှိတဲ့ကလေးတွေကို Vancomycin antibiotic ဆေးနဲ့ အရေပြားမှိုသတ်ဆေးကို ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကလေးအထူးကုဆရာဝန်လေးယောက်က စင်ကာပူဆေးကောင်စီ SMC ကို ကွန်ပလိန်းတက်ပါတယ်။ အခုလို အော်တစ်ဇင်ရှိတဲ့ကလေးတွေကို ဒီဆေးတွေပေးတာဟာ ကလေးတွေအတွက်ဆေးပြင်းတွေဖြစ်ပြီး မလိုအပ်ပဲပေးတဲ့အတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ ကလေးအထူးကုဆရာဝန်တွေကဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီကလေးအထူးကုလေးယောက်ဟာ Dr Erwin Kay ရဲ့ ကုသမှုဟာ no evidence based (အခြေအမြစ်မရှိပဲ) ဒီဆေးတွေပေးပြီးကုသတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး SMC ကို ဒီကိစ္စစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ SMC ရဲ့ကော်မတီက စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ အော်တစ်ဇင်ကလေး အနည်းဆုံး (၃) ယောက်ကို […]
?? အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး booster dose ကို စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ထိုးပေးမယ့်အစီအစဉ်အတွက် Pfizer-BioNTech နဲ့ပဲ စထိုးပေးတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။
September 4, 2021 September 4, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on ?? အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး booster dose ကို စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ထိုးပေးမယ့်အစီအစဉ်အတွက် Pfizer-BioNTech နဲ့ပဲ စထိုးပေးတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။
200 Pageviews FDA ကို Moderna ကတင်ထားတဲ့ booster dose အတွက် submission ဟာမလုံလောက်လို့ပါတဲ့။ FDA က Moderna ဆီက ပိုမိုခိုင်လုံတဲ့ ဒေတာတွေလိုအပ်တာဖြစ်ပြီး ဒီအတွက်ကြောင့် Moderna ဟာ booster dose ထိုးခွင့်ရတာ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်နောက်ကျနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
? ? #ကိုယ်ဝန်ဆောင်များကာကွယ်ဆေးထိုးရင် side effect ခံစားရတာပိုနည်းတာကိုတွေ့ရှိ။
September 2, 2021 September 2, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on ? ? #ကိုယ်ဝန်ဆောင်များကာကွယ်ဆေးထိုးရင် side effect ခံစားရတာပိုနည်းတာကိုတွေ့ရှိ။
258 Pageviews Journal of American Medical Association မှာ အင်္ဂါနေ့ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ ယခုတွေ့ရှိချက်ဟာ မရည်ရွယ်ထားပဲနဲ့ တွေ့ရှိရတဲ့ ရလဒ်ကောင်းတစ်ခုပါ။ Report အပြည့်အစုံကို ဒီလင့်မှာဖတ်ပါ။ https://jamanetwork.com/…/jamanetwo…/fullarticle/2783112 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Seattle ရှိ UW Medicine ဟာ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသူ (၁၇၀၀၀) ကျော်ကို survey လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲမှာ အယောက် (၇၇၇၀) ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲက (၆၇၇၅) ယောက်ကတော့ မီးဖွားပြီးစနို့တိုက်မိခင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာ ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရလာမယ့် မလိုလားအပ်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး side effects တွေဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်ပူပန်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာ ကိုယ်ပူချိန်အရမ်းတက်တာမျိုးဟာ first trimester လိုကာလတွေမှာ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ The American College of Obstetricians & […]
Moderna ဟာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး batch သုံးခုကို ပြန်သိမ်းဖို့ ဂျပန်အာဏာပိုင်တွေနဲ့စီစဉ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
September 2, 2021 September 2, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on Moderna ဟာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး batch သုံးခုကို ပြန်သိမ်းဖို့ ဂျပန်အာဏာပိုင်တွေနဲ့စီစဉ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
262 Pageviews မနေ့က စက်တင်ဘာ ၁ ရက်နေ့မှာပြောကြားချက်အရ စတိန်းလက်စတီးအမှုန်တွေကို အချို့ကာကွယ်ဆေးပုလင်းတွေထဲမှာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သို့သော်လည်းအခုလို စတိန်းလက်စတီးအမှုန်တွေတွေ့ရှိရခြင်းဟာ လူကိုအန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆကြောင်း ဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။
? ပလန့်ဘေ့စ်ဒိုင်းယဒ် (Plant based diet)
September 2, 2021 September 2, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on ? ပလန့်ဘေ့စ်ဒိုင်းယဒ် (Plant based diet)
260 Pageviews ?ရစ်ချတ်မျိုးသန့်တစ်ယောက် မနက်အိပ်ရာနိုးပြီး အိမ်သာထဲမှာဇိမ်နဲ့ ဖုန်းပွတ်ကာသတင်းတွေဖတ်နေတဲ့အချိန် ဖုန်းဝင်လာတော့ ကြည့်လိုက်တာ အကိုကြီးဆီကဖြစ်နေတယ်။ ရစ်ချတ်မျိုးသန့်ရဲ့အကိုကြီးက သူ့ညီလေးကို ငယ်ငယ်ကအတော်ချစ်တယ်။ ညညသူနဲ့အတူလာအိပ်ဖို့ အမျိုးမျိုးစည်းရုံးတယ်။ ? ညနေမြို့ပတ်ပြီး စက်ဘီးစီးရင် ညီလေးပြုတ်ကျမှာစိုးလို့ နောက်ဖက်ကိုလက်နဲ့လှမ်းဖက်ထားတတ်တယ်။ အကိုကြီးကြောင့်ပဲ ရစ်ချတ်မျိုးသန့်ရေကူးတတ်ခဲ့တာ။ အခုလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့ ဖုန်းကိုင်လိုက်တယ်။ “ညီလေး စားပြီးပြီလား” တဲ့။ အိမ်သာတက်နေတဲ့လူကို စားပြီးပလားဆိုတော့ အတော့်ကို ဖြေရခက်တယ်။ ? ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲနော့်။ ဒီမှာလည်း ဖုန်းပွတ်ရင်း ဇိမ်နဲ့ညှစ်တာ ပြီးလုပြီးခင်ဖြစ်နေတာ။ မြန်မာလူမျိုးမှာ အဲ့ဒီစားပြီးပြီလားက အတော်ဖြေရခက်တဲ့မေးခွန်းပဲ။ စားပြီးပြီလို့ဖြေရင် #ဘာနဲ့စားလဲထပ်မေးသေးတယ်။ အခုလည်း အမေရိကကနေ ညီလုပ်သူဆီဖုန်းဆက်တာ “ညီလေး စားပြီးပြီလား” တဲ့။ အတော့်ကို အရေးကြီးတဲ့စကားပဲ။ ရစ်ချတ်မျိုးသန့်က သူ့အကိုကို စကားလွှဲပြီးပြန်မေးတယ်။ “ကိုကြီးဒီနေ့ဆေးရုံကစောစောပြန်လာတာလား❓” အဲ့ဒီတော့ အကိုကြီးက အမေရိကားမှာ […]
ဂျပန်ရှိ Moderna ကာကွယ်ဆေးထဲမှာ မသန့်တာပါတယ်လို့ယူဆရတဲ့ Lot နံပါတ်များ
August 31, 2021 September 2, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on ဂျပန်ရှိ Moderna ကာကွယ်ဆေးထဲမှာ မသန့်တာပါတယ်လို့ယူဆရတဲ့ Lot နံပါတ်များ
198 Pageviews ဒီကိစ္စကို ဩဂတ်စ် ၁၆ ရက်နေ့မှာ ဂျပန်မှာပထမဦးဆုံးစတွေ့တာက Moderna ရဲ့ ဂျပန် distributor ဆေးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ Takeda Pharmaceutical ဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးဆေးပုလင်း ၃၉ ပုလင်းမှာ မသန့်တာတွေပါနေတယ်လို့ ထင်ရကြောင်းသတင်းပို့ပါတယ်။အဲ့ဒီ ၃၉ ပုလင်းကနေ Lot 3004667 က ပုလင်းပေါင်း (၅၇၀၀၀) ကိုသုံးစွဲတာရပ်ဆိုင်းထားပါတယ်။ Lot 3004734 နဲ့ Lot 3004956 တို့ကိုပါထပ်ပြီးရပ်ဆိုင်းပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ Lot 3004734 ကနေ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့ အသက် ၃၀ အရွယ်နဲ့ အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ်အမျိုးသားနှစ်ယောက်ဟာ ဆေးထိုးပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ထိုးခဲ့တဲ့ ပုလင်းထဲမှာ #မသန့်တာပါတဲ့အထောက်အထားမတွေ့ရပါ။ နှစ်ယောက်စလုံးဟာ #ဒုတိယအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် အဖျားတက်ပါတယ်။ အဖျားတက်ပြီး (၂) ရက်အကြာမှာ သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့သေဆုံးရသလဲကို အခုထိစုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲပါ။ […]
?? အိန္ဒိယဟာ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး DNA ? ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ကို အရေးပေါ်သုံးခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
August 21, 2021 September 2, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on ?? အိန္ဒိယဟာ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး DNA ? ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ကို အရေးပေါ်သုံးခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
236 Pageviews ZyCoV-D (ဇိုင်းကော့ဗ်-ဒီ) ကို အိန္ဒိယမှာသာ သူ့အစိုးရကခွင့်ပြုတာဖြစ်ပြီး WHO ကအသိအမှတ်ပြုမှုမရသေးပါ။ ZyCoV-D ဟာ SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ Spike ပရိုတိန်း gene encoding တွေပါတဲ့ DNA plasmid vector တွေပါဝင်ပါတယ်။ India’s drug regulator has granted emergency use approval for Zydus Cadila’s COVID-19 vaccine, the world’s first DNA shot against the coronavirus, in adults and children aged 12 years and above. အိန္ဒိယဆေးကုမ္ပဏီ Zydus Cadila ဟာ […]
Copyright © Richard Myo Thant. All Rights Reserved.	| Theme: News Portal by Mystery Themes.